Daawo Shaqaalaha Wasaaradda Cadaaladda oo tababar loo soo xiray |
Daawo Shaqaalaha Wasaaradda Cadaaladda oo tababar loo soo xiray
Sii hayaha Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha dastuurka Mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa maanta xarunta Wasaaradda ku soo xiray tababar socday saddex maalmood oo cinwaankiisu yahay ( Wacyi-gelinta iyo Baahinta Dastuurka ).
Munaasabadii xiritaanka ayaa waxaa ka qeyb galay mas’uuliyiin ay ka midyihiin Khaalid Cumar Cali, Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Dr. Axmed Cali Daahir, Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda iyo mas’uuliyiin kale.
Mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa ugu horeyn bogaadiyay waaxda qorsheynta sida habsamida leh ee ay u soo diyaarisay tababarkan iyo maadooyinka, sidoo kale dadkii wax ka dhigayay iyo kuwii ka faa’ideystay, iyadoo Wasiirku si gaar ah u xusay dhalinyaradii dhowaan ku soo biirtay Wasaaradda oo tababarkan fursad u ahaa, si ay u fahmaan ugana qeyb qaataan horumarinta dastuurka.
“Shaqada Wasaradda Dastuurka ma aha qorista Dastuurka oo kaliya ee waxay ka shaqaysaa arrimaha Dastuurka, waxay la shaqaynaysaa Guddiga Madaxa banaan ee dib u eegista iyo akhrinta Dastuurka, waxaana ansixiyay baarlamaanka, waana guddi qaran, waxaa kaloo la shaqeyneynaa Guddiga la socodka arrimaha Dastuurka ee Baarlamaanka” ayuu yiri Sii hayaha xilka Wasiirka Cadaaladda.
Siiyaha Wasiirka Cadaaladda iyo arrimaha Dastuurka ayaa hadalkiisa ku daray “Dastuurkan aan ka hadlayno ee shacabka Soomaliyeed yeelan doono waa in uu ka madax banaanaadaa faragalinta shisheeye, kutagri falka iyo kaligii talisnimo, markii ay dadku dawladnimo soo xusuustaan wal wal iyo cabsi ku reebi jirtay, waa inuu ka baxsanaadaa fawdadii iyo reerkayga ayaa saan ah iyo kooxdayda ayaa sidan ah, isla markaana uu dastuurku yahay mid shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin”.
Sidoo kale Sii hayaha Wasiirka Cadaalladda iyo Dastuurka ayaa soo dhoweeyay doodaha iyo dhaq dhaqaadyada bulshada ee ka socda dalka, kuwaasoo ah qaab nabadeed ku socda, isagoo ku tilmaamay inay tahay albaab cusub oo u furmay ummadda Soomaaliyeed.
Mar uu ka hadlayay kaalinta dumarka ee ku aadan horumarinta Dastuurka iyo qeybaha hey’adaha dowladda ayuu soo dhoweeyay, isagoo xusay inuu ku faraxsan yahay in maanta tirada gabdhaha in ay soo badanayaan, isla markaana uu rajeynayo in tiradoodu intan ka sii bataan.
Tababarkan ayaa ka mid ahaa tababarada qorsheysan ee ay Wasaaraddu u diyaarisay tayeynta shaqaalaha Wasaaradda iyo diyaarinta qaabka ugu haboon ee looga qayb galin karo bulshada qayba heeda kala duwan horumarinta arrimaha Dastuurka.